Izimo zezulu ezi-5 ezingavamile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izimo zezulu ezi-5 ezingavamile
Amafu we-Cumulus abonwa endizeni.
I-Meteorology yisayensi ethakazelisayo, ehlala ikumangaza. Futhi ukuthi siphila kwiplanethi ephila kakhulu, kangangoba kwesinye isikhathi kukhona izimo zezulu ezingavamile, kodwa ngobuhle obuyedwa.
Ungathanda ukwazi ukuthi yini eminye yayo? Nalu uhlu lwama-5 anelukuluku lokwazi futhi ayamangaza
1 Amafu kaPyrocumulus
2 Ukuduma Okuhlaza
3 Amafu we-noctilucent
4 Ibhande leVenus
5 Isiphepho somlilo
Kuhle, akunjalo? Leli fu, elibizwa nangokuthi ifu lomlilo, limiswe njengekhowe futhi lenzeka lapho izinga lokushisa lomoya lishisa ngokushesha. Njengoba izinga lokushisa likhuphuka, ukunyakaza okuvezayo kuyenziwa okwenza ubukhulu bomoya bukhuphuke buze bufike ezingeni lokuzinza. Ngakho-ke, zakheka kuphela lapho kunesifo sokushisa esisheshayo nesishubile, njengokuqhuma kwentaba-mlilo, ukushiswa kwamahlathi, ngisho nokuqhuma kwenuzi.
Eyaziwa nangokuthi i-green flash, yinto ebonakalayo eyenzeka ngemuva kokushona kwelanga, noma ngaphambi kokuphuma kwelanga. Kwenzeka lapho ukukhanya kudlula emkhathini; umoya ophansi uqine kakhulu kunalowo wezingqimba ezingenhla, ngakho imisebe yelanga ilandela indlela egobile noma encanyana. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka noma okuluhlaza okwesibhakabhaka kuguqa ngaphezu kokukhanya okubomvu noma okusawolintshi, ngakho-ke kungabonakala ngeso lenyama.
Lawa amafu aphakeme kakhulu akhona emkhathini, atholakala kwi-mesosphere, endaweni ephakeme phakathi kuka-75 no-85km. Zibizwa nangokuthi amafu we-polar mesospheric. Lesi simo ibonakala kuphela lapho ukukhanya kwelanga kubakhanyisela kusuka ngezansi komkhathizwe, kanti izingqimba ezingezansi "zifihliwe," ngomthunzi.
Wake walibona ikapa elibomvana esibhakabhakeni ngenkathi uvuka ekuseni? Lolu ungqimba lubizwa ngeBelt of Venus, olufinyelela phakathi kwama-10 no-20 degrees ngaphezu komkhathizwe. Umbala obomvana we-arc ungenxa yokukhanya okuboniswa lapho buvela khona, okungukuthi, ilanga.
Ama-fire eddies noma iziphepho zomlilo yinto eyenzeka kuphela ngokwemvelo kusuka emlilweni wequbula. Bangakwazi ukukala kusuka kumamitha ayi-10 kuye kwangama-50 ukuphakama, namamitha ambalwa ububanzi; noma ngabe uma kunikezwe izimo ezifanele zingalinganisa ngaphezu kwe-1km ukuphakama, futhi ziqukethe imimoya evunguza ngaphezu kuka I-160km / h. e Lesi sihloko ungabona ukuzalwa koyedwa.
Ubucabangani ngalezi zimo zezulu ezingavamile? Uyabazi abanye?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izimo zezulu ezi-5 ezingavamile
Kungani lina udaka